राजु खनिए अमरमाथि : भने- ‘विधायक हुँदा कोलकाताबाट पर्जापट्टा दिलाउने काम गरेनन्, अब दिल्लीमा कसरी गर्छन्? जनतालाई नढाँट्नुहोस्’ - खबरम्यागजिन
Homeखबरराजु खनिए अमरमाथि : भने- ‘विधायक हुँदा कोलकाताबाट पर्जापट्टा दिलाउने काम गरेनन्, अब दिल्लीमा कसरी गर्छन्? जनतालाई नढाँट्नुहोस्’
राजु खनिए अमरमाथि : भने- ‘विधायक हुँदा कोलकाताबाट पर्जापट्टा दिलाउने काम गरेनन्, अब दिल्लीमा कसरी गर्छन्? जनतालाई नढाँट्नुहोस्’
April 7, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर, दार्जीलिङ 0
‘अचेल अमरसिंह राई जनसभापिछे जनतालाई झुटो बोल्दै हिँडिरहेका छन्। त्यो झुट उनको चुनावी मूल एजेण्डा पनि हो,’ विष्टले भने, ‘उनी चिया श्रमिकलाई पर्जापट्टा दिन्छु भन्दै हिँड्दैछन्। दिल्लीले पर्जापट्टा दिँदैन, त्यो त कोलकाताले दिने हो। एमएलए हुँदा पर्जापट्टा नदिनेले संसदबाट कसरी पर्जापट्टा दिन्छ? जुन काम कोलकातामा गर्नुपर्ने त्यो काम दिल्लीमा कसरी गर्छ? किन यसरी श्रमिकहरूलाई ढाँट्दै हिँडेका?’
मिरिक,7अप्रेल
तृणमूल काङ्ग्रेसको गढ मानिने मिरिकमा राजु विष्टको समर्थनमा आज जनसमुद्रा उर्लियो। गोरामुमो, क्रामाकपा, गोजमुमो समर्थिक भाजपा उम्मेदवार राजु विष्टको समर्थनमा मिरिक बजारको सुपर मार्केटमा जनसभा भएको थियो। गोरामुमो मिरिक महकुमा समिति अध्यक्ष महेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न जनसभालाई राजु विष्ट लगायत, मोर्चा प्रवक्ता बीपी बजगाईँ, कार्यकारी अध्यक्ष लोपसाङ लामा, गोरामुमोका निरज जिम्बा, जेबी तामाङ, क्रामाकपाका गोविन छेत्री लगायतले सम्बोधन गरे।
‘कुनै दोषबिना झुटो मुद्दा खपिरहेका5हजार गोर्खा दाजुभाइ, घर छोडेर जङ्गलमा बस्नु परिरहेका छन्,’ राजु विष्टले शुरुमा नै आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै भने, ‘म सांसद हुने वित्तिकै सबैभन्दा पहिले उनीहरूलाई घर फर्काउने काम गर्नेछु। एउटा कमिशन बसाउनेछु र झुटा मुद्दाहरूबारे दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउनेछु। अब यस्तो अत्याचार सहन गरिनेछैन।’
यसैबीच उनले तृणमूल काङ्ग्रेस उम्मेदवार अमरसिंह राईको खिल्ली उडाउँदै राईको झुट पर्दाफास गरे।
विमल गुरुङलगायत पहाडको सपना भाजपाले नै पूरा गर्ने पनि उनले बताए। ‘पहाडको सपना के हो त्यो भाजपा र मलाई थाहा छ। जब भाजपाको सरकार बनिन्छ, पहाडको लागि स्थायी र ठोस सामाधान गर्नेछौं। जनजातिबारे काम चल्दैछ। उचित समयमा त्यसको सामाधान हुनेछ।’
यता एनआरसीबारे पनि उनले बोले। उनीअनुसार एनआरसी भयोभने गोर्खा सुरक्षित हुनेछन्। नत्र काँडेतारबाट छिरेर आउनेहरूले गोर्खालाई मिच्नेछन्। अल्पसंख्यक बनाउनेछन् अनि शासन गर्नेछन्।
मिरिक नगरपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार रहेको पनि उनले खुलाए। ‘नगरपालिकामा 20 प्रतिशतमात्रै काम भएको छ। 70 प्रतिशत पैसा कसको गोजीमा गयो? त्यो भ्रष्टाचार पर्दाफास गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा गरिबले पाउनुपर्नेछ। हाउजिङ स्किम पनि आफ्नोलाई चेपेर मात्र दिइरहेको छ, त्यो भ्रष्टाचारबारे ठोस कदम उठाउनेछु।’
ममताको ‘चिन्हारी’ कुन हो?
गोजुमुमो प्रवक्ता बीपी बजगाईँले ममता व्यानर्जीलाई सोधे, तपाईँले भनेको पहाडको चिह्नारी के हो? पहाडको हरेक गोर्खाको मुटुमा डाक्टरको आला लगाएर सुन्नुहोस् हरेक ढुकढुकीले गोर्खाल्याण्ड गोर्खाल्याण्ड भन्छ। तपाईँले भनेको चिन्हारी कुन हो? स्पष्ट पार्नुहोस्।’
बजगाईँले व्यानर्जीले सफेद झुट बोलिरहेको अनि विनय तामाङहरूले त्यही झुट प्रचार गरिरहेको पनि बताए। उनले पर्जापट्टाको कुरा पनि झिके। भने, ‘ढाँट्नुको पनि सिमा हुन्छ। मिरिकमा पर्जापट्टा दियो त। के त्यो भ्यालिड छ? बनबस्तीको ऐन बनेको कति भयो? त्यो ऐन लागू गरेको खै? ऐनले दिएको अधिकार अनुसार बनबस्तीलाई त पर्जापट्टा दिएको छैन, चियाबारीलाई कसरी दिने?’
राजु विष्टले जितेमा उनले केन्द्रबाट पर्जापट्टाको कानून बनाएर ल्याउने पनि बताए। यसैबीच उनले बङ्गाल प्रशासनको दादागिरीबारे पनि खुलाए।
‘मोर्चा नेता कर्णल रमेश आलेको गाडी आज बाटैबाट पुलिसले सिज गऱ्यो, कर्णल आले अहिले जङ्गलमा छन्। बङ्गालको कानून कसको लागि हो? हामी त गिट्ठा भ्यागुर खान पनि जान्दछौं, भोलि तिमीलाई गाह्रो पर्दा गिट्ठा भ्याकुर खान सक्छौ?,’ बजगाईंले सोधे।
केन्द्रको योजनामा विनयहरूको विकासे तुजुक
यता गोरामुमो श्रमिक सङ्गठनका नेता जेबी तामाङले आफूलाई पक्राउ गरेर बङ्गालले आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाए। तर बङ्गालले दबाउँदा आफू नदब्ने पनि बताए। उनले विनय तामाङहरूको खिल्ली पनि उडाए। ‘अचम्म के छ भने प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना होस वा प्रधानमन्त्री आवास योजना, नरिवल जिटिएको बिओएले पो फुटाउँछ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको योजनामा विकासको किन तुजुक?’
पानीभन्दा रगत बाक्लो
क्रामाकपाका सचिव गोविन छेत्रीले भाजपा उम्मेदवार राजु विष्टलाई क्रामाकपाले समर्थन गर्ने वित्तिकै सबैभन्दा धेर वामपन्थीहरूले आफूहरूलाई गाली गरेको भन्दै दलहरूबीच सैद्धान्तिक ध्रुविकरण रहेपनि मुद्दाको लागि भनेर क्रामाकपाले राजु विष्टलाई समर्थन गरेको जनाए।
‘वामपन्थीहरूले हामीलाई गाली गर्दैछन्। तर मुद्दाको लागि अघि पनि हामीले आफ्नो अडान स्पष्ट गरेका हौं,’ उनले भने, ‘किनभने पानीभन्दा रगत बाक्लो हुन्छ। रगतको लागि हामीले समर्थन गरेका हौं।’
एलबी राईको वार्डमा 10 प्रतिशत पनि भोट अमरसिंह राईलाई जाँदैन
गोरामुमो नेता निरज जिम्बाले पहिलोपल्ट भाजपा उम्मेदवार जसवन्त सिंहलाई जिताउँदा केन्द्रमा भाजपाको सरकार नबनेको अनि दोस्रो पल्ट एसएस अहलुवालियालाई जिताउँदा सरकार बनेको तर देशको काम गर्दागर्दै भाजपाले गोर्खाहरूको लागि काम गर्न नपाएको बताए।
‘पाँचवर्ष भाजपा सरकारले देशको ठूलोठूलो समस्याको सामाधान गर्दै समय सकियो,’ उनले भने, ‘हामीले मन दुःख गर्नु हुँदैन। यसपालि गोर्खाहरूलाई दिएको बचन भाजपाले पूरा गर्नेछ।’
यसैबीच 80 प्रतिशत भोट हरेक वार्डबाट नगए पार्षदहरूलाई कार्यालय नआउनू भन्ने तृणमूल नेता एलबी राईले दिएको फर्मानको कुरा पनि जिम्बाले कोट्याए। ‘यसपालि एलबी राईको वार्डमा 10 प्रतिशत पनि भोट अमरसिंह राईलाई जाँदैन,’ उनले भने, ‘यस हिसाबले नैतिकरूपमानै एलबी राईले नगगरपालिका छोड्नुपर्छ।’
गोर्खाल्याण्ड जनआन्दोलन टेवा मञ्च राजु विष्टको पक्षमा
कर्णल रमेश आलेको गाडी सिज : पुलिसको घेराबन्दीमा आले : चुनाउ आयोगमा नालिस